အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်တွင် အလုပ်အကိုင် မရှိသော်လည်း အလုပ်ကို ရှာဖွေခြင်း မပြုသော အခြေအနေကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကို တိုင်းတာရာတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်သမားထု အတွင်းမှ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသော လူဦးရေ နှင့် စုစုပေါင်း လူဦးရေ အချိုးအစားကို တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်သည်။
အလုပ်လက်မဲ့များ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးအတွင်း ရှီကာဂိုမြို့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် တန်းစီနေကြပုံ၊ ၁၉၃၁ ခုနှစ်
၂ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း၏ မှန်ကန်မှု
၃ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၄ အလုပ်လက်မဲ့သူ အမျိုးအစားများ
၅ အလုပ်သမားထု အတွင်း ပါဝင်မှုနှုန်း
၆ အလုပ်လက်မဲ့ အမျိုးအစားများ
၆.၁ စပ်ကူးမတ်ကူး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း
၆.၂ အဆောက်အအုံပြောင်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်း
၆.၃ အလုပ်လက်မဲ့ သံသရာ ဖြစ်ခြင်း
၇ အလုပ်လက်မဲ့များပြားခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ
အလုပ်လုပ်ကိုင်သော အလုပ်သမားထု တွင် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး၍ အလုပ်လုပ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေသောသူများ ပါဝင်သည်။ ထိုသူများတွင် စစ်မှုထမ်းနေသူများ၊ အကျဉ်းကျနေသူများနှင့် စိတ္တဇဆေးရုံတွင် ရောက်ရှိနေသူများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်း မရှိပေ။ အလုပ်သမားထုတွင် မပါဝင်သော အခြားသူများမှာ အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းသူများ၊ အငြိမ်းစားများ နှင့် အချိန်ပြည့် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားများ ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေး ကျဆင်းနေချိန်များတွင် အချို့သူများသည် အလုပ်ရှာဖွေရန် ခက်ခဲသဖြင့် ဆက်လက် ရှာဖွေခြင်း မပြုတော့ပေ။ လူတစ်ယောက်သည် ရက်သတ္တပတ် ၄ ပတ် ထက်ပို၍ အလုပ်ကို ရှာဖွေခြင်း မရှိတော့ပါက ထိုသူကို အလုပ်သမားထုတွင် ထည့်သွင်း တွက်ချက်ခြင်း မပြုတော့ပေ။ ထို့ပြင် အချို့သူများမှာ အချိန်ပြည့် အလုပ်အကိုင်ကို ရှာဖွေသော်လည်း မရသဖြင့် အချိန်ပိုင်း အလုပ်တွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ပါက ထိုသူများကို အလုပ်ရှိသူဟု သတ်မှတ်သဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့ စာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိပေ။ အချို့သူများမှာ အလုပ်နှစ်ခု လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အချိန်ပို နာရီများစွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ ရှိသော်လည်း အလုပ်တစ်ခု အဖြစ်သာ ရေတွက်သတ်မှတ်သည်။ ထို့ပြင် ဥပဒေပြင်ပမှ အလုပ်အကိုင်များ ဖြစ်သော မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် လောင်းကစားမှုပြုခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း အလုပ်အကိုင် အဖြစ် ထည့်သွင်း တွက်ချက်မှု မပြုပေ။
အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများပြင်ဆင်
အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများတွင် ပညာရေး အဆင့်နိမ့်ခြင်း အပြင် လိင်၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုး ခွဲခြား ဆက်ဆံ ခံရခြင်း များလည်းပါဝင်သည်။
အလုပ်လက်မဲ့ ဖြ်စနေသူ အမျိုးအစားများတွင် အလုပ်ပြုတ်သူများ၊ အလုပ်မှ ထွက်သူများ၊ ယခင်က အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးပြီး လက်ရှိ အလုပ်ရှာဖွေနေသူများနှင့် အလုပ်ကို ယခုမှ စတင်ရှာဖွေနေသူများ ပါဝင်သည်။
အလုပ်သမားထု အတွင်း ပါဝင်မှုနှုန်းပြင်ဆင်
အလုပ်သမားထု အတွင်း ပါဝင်နေသော အသက်ပြည့်ပြီးသော လူဦးရေနှင့် စုစုပေါင်း လူဦးရေ အချိုးအစားကို အလုပ်သမားထုအတွင်း ပါဝင်မှုနှုန်းဟု ခေါ်သည်။
စပ်ကူးမတ်ကူး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း (frictional unemployment) ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ အလုပ်ရှာနေသူများ မိမိတို့နှင့် သင့်လျော်သော အလုပ်မရမီ အချိန် နှင့် လုပ်ငန်းများမှ မိမိတို့ လုပ်ငန်းနှင့် သင့်လျော်သော ဝန်ထမ်း မရရှိမီ အချိန်ကာလတွင် ဖြစ်ပွားသည်။ ထို့အပြင် မိမိတို့ အလုပ်လုပ်၍ ရသော ရာသီ ပြင်ပ ဖြစ်သဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေခြင်း မျိုးလည်း ရှိသည်။ ဥပမာ လယ်သမားတစ်ဦး လယ်စိုက်ရန် ရာသီမဟုတ်သော အချိန်တွင် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။
စပ်ကူးမတ်ကူး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း သည် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း လျော့နည်းနေချိန်တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသည်။ ထိုသို့သော အချိန်တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ အဆမတန် များပြားနေသဖြင့် လူများ အလုပ်တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်ပြီး စပ်ကူးမတ်ကူး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆောက်အအုံပြောင်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်းပြင်ဆင်
အဆောက်အအုံပြောင်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်း (Structural unemployment) ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ကိုက်ညီသော အရည်အချင်း မရှိခြင်းနှင့် ၎င်းတို့တွင် ရှိထားသော အရည်အချင်းများမှာ အသုံးမဝင်တော့ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လက်နှိပ်စက် စာရေး တစ်ယောက် သည် ကွန်ပျူတာများ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာချိန်တွင် ၎င်းနှင့်ကိုက်ညီသော အလုပ်ကို ရှာမရနိုင်ခြင်း မျိုးဖြစ်သည်။
အဆောက်အအုံပြောင်း အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်း သည် ရှင်သန် လှုပ်ရှားနေသော စီးပွားရေး အဆောက်အအုံ၏ ပြယုဂ်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
အလုပ်လက်မဲ့ သံသရာ ဖြစ်ခြင်းပြင်ဆင်
အလုပ်လက်မဲ့ သံသရာ ဖြစ်ခြင်း (Cyclical unemployment) သည် စီးပွားရေး ကျဆင်းချိန်တွင် အလုပ်လက်မဲ့ ဦးရေများပြားလာခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။
အလုပ်လက်မဲ့ များပြားခြင်း၏ အကျိုးဆက်များမှာ နိုင်ငံအတွင်း ရှိသည့် အလုပ်သမားထု၏ စွမ်းအားကို အပြည့်အဝ အသုံးမချနိုင်သဖြင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေသည်။ ထို့အပြင် အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ပွားသူတို့အတွက် စီးပွားရေး နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ 
↑ Robert L. Sexton (2008). Exploring Macroeconomics. Cengage Learning. ISBN 1-4390-4049-4.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း&oldid=419557" မှ ရယူရန်
၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၄:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၄:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။